You Tube Premium နဲ့ YouTube Music တွေက ဘာတွေလဲ?ဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိသလဲ? – DigitalTimes.com.mm
149 Shares 57 Views
You Tube Premium နဲ့ YouTube Music တွေက ဘာတွေလဲ?ဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိသလဲ?
YouTube ကလည်း တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲမှုကြီးတွေ စလုပ်လာပြီး အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ streaming-music ပိုင်းကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ YouTube Music app သာရောက်လာခဲ့ရင် Google Play Music ဆိုတာ နောက်ထပ်တွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး YouTube Red လို့နာမည်တပ်ထားတဲ့ app ကလည်း YouTube Premium ဆိုပြီးပြောင်းလဲထွက်လာမှာပါ။ ဒါဆို အခုပြောခဲ့တဲ့ YouTube Music နဲ့ YouTube Premium ဆိုတာဘာတွေလဲ..ကြည့်လိုက်ရအောင်
YouTube Music/ Music Premium = Google’s Spotify
တကယ်တမ်းတော့ YouTube Music App ရှိခဲ့တာ ၂နှစ်လောက်တောင် ရှိသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ထွက်ပြီးကတည်းက ထပ်မြှင့်တာဘာညာမလုပ်တော့ ဘယ်သူမှမသိသလောက်ဖြစ်နေတာပါ။
အခုတော့ Update ဗားရှင်းသစ်ထုတ်ဖို့ စီစဉ်နေပြီဖြစ်ပြီး Spotify လို Music streaming ဝန်ဆောင်မှုမျိုးပေးတော့မှာဖြစ်လို့ ဖုန်း app ကနေဖြစ်ဖြစ် browser ကနေဖြစ်ဖြစ် သီချင်းတွေကို ကောင်းကောင်းခံစားနိုင်တော့မှာပါ။
Free ဗားရှင်းမှာတော့ ထုံးစံအတိုင်းကြော်ငာတွေပါမှာဖြစ်ပြီး ကြော်ငြာတွေမမြင်ချင်ဘူး ဖယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တေ့ Premium ဗားရှင်းကို တစ်လ $9.99 နဲ့သုံးလို့ရနိုင်မှာပါ။ YouTube Red ကို subscribe လုပ်ပြီးသားဆိုရင်တော့ ကြော်ငြာတွေမပါတဲ့ YouTube Music လိုသုံးလို့ရနိုင်မယ့် အားသာချက်ရှိပါတယ်။
YouTube Premium = YouTube Red
ခုချိန်ထိတော့ YouTube Red က တစ်လကို $9.99 ပေးရတဲ့ paid app အနေနဲ့ပဲရှိနေပါသေးတယ်။ YouTube Premium မှာတော့ ဒီပုံစံကိုပြောင်းလိုက်ပြီး တစ်လကို $11.99 သွင်းလိုက်ရုံနဲ့ YouTube Red က ကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်လို့ရရုံမကဘဲ YouTube Music ကိုလည်း သုံးနိုင်ဦးမှာပါ။
ပြောရရင် ခုချိန်မှာအခွင့်အရေးရနေတဲ့သူတွေကတော့ YouTube Red ကို subscribe လုပ်ထားသူတွေပါပဲ။ ၂ခုသုံးချင်ရင် သူများတွေလို $11.99 ပေးစရာမလိုဘဲ ပုံမှန်လို $9.99 ပဲပေးပြီး YouTube Music ကိုပါသုံးလို့ရမှာဆိုတော့ သူတို့အတွက်တော်တော်တန်ပါတယ်။
Google Play Music ကို subscribe လုပ်ထားသူတွေအတွက်ရော အခွင့်အရေးမရှိဘူးလား??
တူတူပါပဲ။ Google Play Music နေရာမှာ YouTube Music Premium ကိုအစားထိုးလိုက်တာဆိုတော့ Google Play Music မှာ subscribe လုပ်ထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်း YouTube Music Premium ကိုရောက်သွားတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ။ Play Music ကလည်းပျောက်သွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်လို့ လက်ရှိ subscribe လုပ်ထားသူတွေအနေနဲ့ နှစ်မျိုးလုံးကိုသုံးလို့ရနိုင်မှာပါ။
YouTube Music နဲ့ Spotify တို့ဘာတွေကွာသလဲဆိုရင်??
ဆိုတော့ သန်းပေါင်းများစွာသော Spotify user တွေက ဘာလုပ်ရမှာလဲလို့ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။ ဘာကွာသလဲဆိုတော့ YouTube Music Premium မှာတော့ Google ရဲ့ Assistant AI ကို ထည့်သွင်းပေးထားတာက အားသာချက်လို့ပြောရမှာပါ။ သီချင်းတွေရှာချင်တဲ့အခါ ရတဲ့စာသားတစ်ပိုင်းတစ်စကိုပဲဖြစ်ဖြစ် သီချင်းသံစဉ်ပဲရတယ်ဆိုရင်လည်း သံစဉ်လေးကိုပဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှာပေးနိုင်တဲ့ Google Assistant က Spotify ထက်ပိုခိုက်စရာပါပဲ။
ရောက်နေတဲ့တည်နေရာကိုသုံးပြီးတော့လည်း ကိုက်ညီတဲ့သီချင်းတွေဖွင့်ပေးနိုင်ဦးမှာပါ။ gym မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ သင့်တော်တဲ့သီချင်းတွေ လေယာဉ်မစီးခင်မှာဆို စိတ်ငြိမ်စေတဲ့သီချင်းမျိုးတွေ ဒါမျိုးတွေရွေးချယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်လို့ Spotify နဲ့ယှဉ်လာရင်တော့ ဘာကိုသုံးသင့်တယ်ဆိုတာ ရွေးနိုင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။
Spotify နဲ့တိုက်ရိုက်ယှဉ်လိုက်တယ်ဆိုတာ သဘောကိုယှဉ်လိုက်တာပါ။ နောက်ပိုင်း streaming music ဝန်ဆောင်မှုတွေများလာတော့ ဘယ်ဟာကဖြင့် ဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိလည်းဆိုတာကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့ ဖော်ပြလိုက်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း…..
YouTube ကလညျး တဖွညျးဖွညျးပွောငျးလဲမှုကွီးတှေ စလုပျလာပွီး အခုနောကျပိုငျးမှာတော့ streaming-music ပိုငျးကိုရောကျလာခဲ့ပါပွီ။ YouTube Music app သာရောကျလာခဲ့ရငျ Google Play Music ဆိုတာ နောကျထပျတှရေ့တော့မှာမဟုတျပါဘူး။ နောကျပွီး YouTube Red လို့နာမညျတပျထားတဲ့ app ကလညျး YouTube Premium ဆိုပွီးပွောငျးလဲထှကျလာမှာပါ။ ဒါဆို အခုပွောခဲ့တဲ့ YouTube Music နဲ့ YouTube Premium ဆိုတာဘာတှလေဲ..ကွညျ့လိုကျရအောငျ
တကယျတမျးတော့ YouTube Music App ရှိခဲ့တာ ၂နှဈလောကျတောငျ ရှိသှားပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ ထှကျပွီးကတညျးက ထပျမွှငျ့တာဘာညာမလုပျတော့ ဘယျသူမှမသိသလောကျဖွဈနတောပါ။
အခုတော့ Update ဗားရှငျးသဈထုတျဖို့ စီစဉျနပွေီဖွဈပွီး Spotify လို Music streaming ဝနျဆောငျမှုမြိုးပေးတော့မှာဖွဈလို့ ဖုနျး app ကနဖွေဈဖွဈ browser ကနဖွေဈဖွဈ သီခငျြးတှကေို ကောငျးကောငျးခံစားနိုငျတော့မှာပါ။
Free ဗားရှငျးမှာတော့ ထုံးစံအတိုငျးကွေျာငာတှပေါမှာဖွဈပွီး ကွျောငွာတှမေမွငျခငျြဘူး ဖယျခငျြတယျဆိုရငျတေ့ Premium ဗားရှငျးကို တဈလ $9.99 နဲ့သုံးလို့ရနိုငျမှာပါ။ YouTube Red ကို subscribe လုပျပွီးသားဆိုရငျတော့ ကွျောငွာတှမေပါတဲ့ YouTube Music လိုသုံးလို့ရနိုငျမယျ့ အားသာခကျြရှိပါတယျ။
ခုခြိနျထိတော့ YouTube Red က တဈလကို $9.99 ပေးရတဲ့ paid app အနနေဲ့ပဲရှိနပေါသေးတယျ။ YouTube Premium မှာတော့ ဒီပုံစံကိုပွောငျးလိုကျပွီး တဈလကို $11.99 သှငျးလိုကျရုံနဲ့ YouTube Red က ကွိုကျတဲ့ဗီဒီယိုကိုကွညျ့လို့ရရုံမကဘဲ YouTube Music ကိုလညျး သုံးနိုငျဦးမှာပါ။
ပွောရရငျ ခုခြိနျမှာအခှငျ့အရေးရနတေဲ့သူတှကေတော့ YouTube Red ကို subscribe လုပျထားသူတှပေါပဲ။ ၂ခုသုံးခငျြရငျ သူမြားတှလေို $11.99 ပေးစရာမလိုဘဲ ပုံမှနျလို $9.99 ပဲပေးပွီး YouTube Music ကိုပါသုံးလို့ရမှာဆိုတော့ သူတို့အတှကျတျောတျောတနျပါတယျ။
Google Play Music ကို subscribe လုပျထားသူတှအေတှကျရော အခှငျ့အရေးမရှိဘူးလား??
တူတူပါပဲ။ Google Play Music နရောမှာ YouTube Music Premium ကိုအစားထိုးလိုကျတာဆိုတော့ Google Play Music မှာ subscribe လုပျထားတဲ့သူတှအေကုနျလုံးကလညျး YouTube Music Premium ကိုရောကျသှားတဲ့သဘောမြိုးပါပဲ။ Play Music ကလညျးပြောကျသှားမှာတော့မဟုတျပါဘူး။ ဆကျရှိနဦေးမှာဖွဈလို့ လကျရှိ subscribe လုပျထားသူတှအေနနေဲ့ နှဈမြိုးလုံးကိုသုံးလို့ရနိုငျမှာပါ။
YouTube Music နဲ့ Spotify တို့ဘာတှကှောသလဲဆိုရငျ??
ဆိုတော့ သနျးပေါငျးမြားစှာသော Spotify user တှကေ ဘာလုပျရမှာလဲလို့ပွောကောငျးပွောပါလိမျ့မယျ။ ဘာကှာသလဲဆိုတော့ YouTube Music Premium မှာတော့ Google ရဲ့ Assistant AI ကို ထညျ့သှငျးပေးထားတာက အားသာခကျြလို့ပွောရမှာပါ။ သီခငျြးတှရှောခငျြတဲ့အခါ ရတဲ့စာသားတဈပိုငျးတဈစကိုပဲဖွဈဖွဈ သီခငျြးသံစဉျပဲရတယျဆိုရငျလညျး သံစဉျလေးကိုပဲဆိုပွီးတော့ဖွဈဖွဈရှာပေးနိုငျတဲ့ Google Assistant က Spotify ထကျပိုခိုကျစရာပါပဲ။
ရောကျနတေဲ့တညျနရောကိုသုံးပွီးတော့လညျး ကိုကျညီတဲ့သီခငျြးတှဖှေငျ့ပေးနိုငျဦးမှာပါ။ gym မှာရောကျနတေယျဆိုရငျလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျဖို့ သငျ့တျောတဲ့သီခငျြးတှေ လယောဉျမစီးခငျမှာဆို စိတျငွိမျစတေဲ့သီခငျြးမြိုးတှေ ဒါမြိုးတှရှေေးခယျြပေးနိုငျမှာဖွဈလို့ Spotify နဲ့ယှဉျလာရငျတော့ ဘာကိုသုံးသငျ့တယျဆိုတာ ရှေးနိုငျပွီလို့ထငျပါတယျ။
Spotify နဲ့တိုကျရိုကျယှဉျလိုကျတယျဆိုတာ သဘောကိုယှဉျလိုကျတာပါ။ နောကျပိုငျး streaming music ဝနျဆောငျမှုတှမြေားလာတော့ ဘယျဟာကဖွငျ့ ဘယျလိုအားသာခကျြတှရှေိလညျးဆိုတာကို ရှေးခယျြနိုငျဖို့ ရှေးခယျြစရာတဈခုအနနေဲ့ ဖျောပွလိုကျခွငျးသာဖွဈကွောငျး…..
Apple ရဲ့ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့လို့ ဒေါ်လာ ၅၃၉သန်း လျော်ကြေးပေးရတော့မယ့် Samsung
၆.၃ လက်မ Notch Screen နဲ့ Dual Camera ပါတဲ့ Vivo Z1